✏Pangu Tool ကို အသုံးပြုပြီး iOS 7.1.2 ကို Jailbreak လုပ်နည်း✏ ~ mgkhainghtoo
✏Pangu Tool ကို အသုံးပြုပြီး iOS 7.1.2 ကို Jailbreak လုပ်နည်း✏
Pangu untethered jailbreak က iOS 7.1, iOS 7.1.1 ကို jailbreak လုပ်နိုင်သလို Apple က မနေ့က Update လုပ်ပေးလိုက်သော iOS 7.1.2 ကို လည်း အဆင်ပြေစွာ Jailbreak လုပ်နိုင်ပါတယ်
Pangu Tool သည် iOS 7.1 – iOS 7.1.2 တိုကို Install လုပ်ထားသော iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S and iPhone 4
တို့ကို Jailbreak လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့၏ iDevices ကို passcode ထည့်ထားရင် jailbreak fail ဖြစ်တက်ပါတယ်။passcode ထည့်ထားပါက Settings -> General -> Passcode Lock On -> Turn Passcode Off လုပ်ပေးပါ။
Step 1: Pangu jailbreak for Mac or Windows ကိုအောက်လင့်တွင် Download ပါ
★ Pangu 1.1.0 Windows version★
★ Mac version ★
Mac user တွေက Pangu dmg file ကို Double click လုပ်ပြီး Run လိုက်ပါ။
Windows users: Pangu exe ကို Run as Administrator ဖြင့် Run ပေးပါ ။Pangu exe Right Click ထောက်ပြီး “Run as Administrator” ကို ကလစ်ပေးပါ။
Step 3: မိမိ တို့၏ iDevices ကို Jailbreak Tool ကသိပြီဆိုရင် black Jailbreak button ကို ကလစ်ပေးပါ။
Step 4: မိမိ တို့ iDevices ၏ Settings -> General -> Date & Time သို့ဝင်ပြီးအောက်ကပုံလေးအတိုင်းပြောင်းပေးပါ
Step 5: date ကိုပြောင်းပေးလိုက်ရင် မိမိတို့၏ iDevices ဟာ restart ကျသွားပြီး Pangu app ကို install လုပ်ပေပြီး ပါဝါပြန်တက်လာပါလိမ်မည်။
Step 6: ထို Pangu app ကို လက်ဖြင့်တို့ပေးလိုက်ပါ။ထိုအခါအောက်ကစာလေးအတိုင်မေးလာရင်Continue ကိုရွေးပေးပါ။
“sure you want to open the Application “Pangu” from Developer “iPhone Distribution: Hefei Bo Fang communication technology co., LTD?”.
Step 7: မိမိတို့၏ device reboot ထပ်လုပ်နေခြင်းကိုစောင့်နေပေးပါ။Minute အနည်းငယ်ကြာလျှင် ပါဝါပြန်တက်လာပြီး အချစ်တော် Cydia ကိုတွေမြင်ရမှာပါ။ iOS 7.1.2. ကိုအောင်မြင်စွာ Jailbreak လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Posted in: IOS 7.1.2 JAILBREAK